Germalka oo ay ka socdaan Banaan-baxyo looga soo horjeedo Xanibaadaha Corona Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka CaalamkaGermalka oo ay ka socdaan Banaan-baxyo looga soo horjeedo Xanibaadaha Corona
Germalka oo ay ka socdaan Banaan-baxyo looga soo horjeedo Xanibaadaha Corona
March 15, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Kumanaan dad ah ayaa ka qeybgalay, Sabtidii, banaanbaxyo laga abaabulay magaalooyin badan oo Jarmal ah oo looga soo horjeedo xayiraadaha lagu soo rogay in lagu xakameeyo Covid-19, in kasta oo ay saraakiisha caafimaadka ka digayaan halista duufaan saddexaad oo faafa.
Magaalada Munich, booliisku waxay ku dhawaaqeen inay kala eryeen banaanbax ay kumanaan dad ah ku urursanayeen meel u dhow xarunta baarlamaanka gobolka Bavaria. Magaalada Dusseldorf (galbeed), qiyaastii laba kun oo qof ayaa mudaharaad sameeyay, sida ay booliisku sheegeen, iyo ilaa 100 gawaari ah ayaa ka gudbay xerada magaalada, iyagoo ka mudaaharaadaya tallaabooyinka lagu xakameynayo aafada.
Magaalada Dresden (gobolka Saxony), boqolaal dad ah ayaa ku mudaharaaday meel u dhow baarlamaanka gobolka, sida ku xusan qiyaasta booliska maxalliga ah, oo ay ku jiraan kuwa u dhaqdhaqaaqa midigta fog ee ololaha ka hortagga tallaalka, iyagoo og in maamulka maxalliga ahi mamnuuceen bannaanbaxa go’aanka lagu oggolaaday.
Ku xigeenka madaxa dawlada hoose, Martin Deulig oo ka tirsan xisbiga Social Democratic Party, ayaa waydiiyay: “Dadka ka qayb qaadanaya mudaharaadkan la mamnuucay ma ka warqabaan baaxada danbiyada culus? Suurtagal maaha in sidan loo joojiyo fayraska Corona, laakiin taa lidkeeda ayaa sameeneysaan!
Toddobaadka dhammaadkiisa, isu-imaatinno ayaa lagu dhawaaqay magaalooyinka kale ee Jarmalka, sida Kiel, Hanover iyo Magdeburg. Banaanbaxyadu waxay ku soo beegmayaan xilli mas’uuliyiinta caafimaadka Jarmalku ay ka digayaan halista mawjadaha saddexaad ee cudurkan, oo ka dhashay nooca Ingiriiska ee fayraska is beddelay ee Corona.